လှလှပပ ငပလီကို သက်သက်သာသာသွားပြီး ထူးထူးခြားခြားဘာတွေလုပ်မလဲ Ngapali Beach, Myanmar – NU MYAT AROUND THE WORLD
March 17, 2018 April 20, 2021 Posted in Uncategorized
ငပလီအရမ်းလှတယ်နော်။ အဆုံးအစမရှိတဲ့ ကောင်းကင်ရယ် ပင်လယ်ရယ် ဖြူလွလွသဲသောင်ပြင်ရယ် လှိုင်းပုတ်သံလေးတွေရယ် သဘာဝတရားကြီးက အရမ်းကို ကဗျာဆန်တာပဲ…
ငပလီဆိုရင် သွားရခက်တယ်။ ဈေးကြီးတယ်။ ပိုက်ဆံရှိမှ သွားနိုင်မယ်လို့ မှတ်ယူထားကြတယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် ငပလီဆို အချေကမ်းခြေပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့ ကားလမ်းတွေကောင်းလာသလို Tour Bus အကောင်းစားတွေလည်း ပြေးဆွဲတော့မှာဆိုတော့ လူတိုင်းသွားရလွယ်သွားပြီ။ နုမြတ်ကိုယ်တိုင်လည်း အရင်တစ်ပတ်က ကားနဲ့ သွားခဲ့တာ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။
သုခလမ်းညွှန်က Tour Bus က တစ်တန်းမှာ ၃ခုံပဲပါတဲ့ VIP Bus ဆိုတော့ ထိုင်ရတာ ချောင်ချောင်ချိချိနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ ကားလမ်းကြောင်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ ဂွ-ငါးသိုင်းချောင်းဘက်က သွားလို့ မောင်းချိန်က ၁၀နာရီ-၁၁နာရီလောက်ပဲကြာတယ်။ ကားခကလည်း အသွားအပြန်မှ ၄သောင်းခွဲကျပ်ပဲရှိတယ်။ ကားနဲ့သွားလို့ရတာကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားကြလို့ကားအကြောင်း သက်သက်အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒီLink ထဲ ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်။
ဒီ Post မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ။ ဘယ်တွေသွားရမလဲ။ ဘယ်မှာတည်းရမလဲ။ ဘယ်လိုတွေလည်ရမလဲဆိုတာကို ရေးပေးထားပါတယ်။
🏝🌊လှလှပပ ငပလီ ⛱🌴
ငပလီက အာရှမှာ အလှဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုထဲမှာပါတယ်။ တမျှော်တခေါ်ရေပြင်ကျယ်ကြီးရယ်။ ကမ်းစပ်ကိုပုတ်ခတ်လာတဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေရယ်၊ ကမ်းစပ်က ဖြူလွလွသဲတွေရယ်၊ စိမ်းညို့နေတဲ့ အုန်းပင်တန်းကြီးတွေနဲ့ သဘာဝအလှအပက စာဖွဲ့လို့ မမှီနိုင်ပါဘူး။ ငပလီကို သဘောကျတာက သဘာဝကို သဘာဝအတိုင်း အရှိအရှိအတိုင်း ခံစားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ငပလီက သဲသောင်တွေက အမှိုက်မရှိဘူး။ ကမ်းခြေမှာ ဈေးသည်လုံးဝပေးမရောင်းဘူး။ ဆိုင်ကယ်တို့ စက်ဘီးတို့လည်း မောင်းလို့မရဘူး။ ရေထဲမှာလည်း Water Activities တွေမရှိဘူး။ သဘာဝကို သဘာဝအတိုင်းခံစားနိုင်တယ်။ သဘာဝတရားကြီးနဲ့ ကိုယ်တွေပဲ။ အာရုံနောက်စရာ ဘာဆိုဘာမှမရှိတာ သဘောကျစရာပါ။
🛶ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ 🌊
ကမ်းခြေဆိုတော့ ပင်လယ်ထဲဆင်းမယ်။ လှိုင်းစီးမယ်။ ရေကူးမယ်။ သောင်ပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်မယ်။ sunset ကြည့်မယ်။ ဒါတွေကတော့ ဘယ်သူမဆိုသိပြီးသားတွေပေါ့။ ကိုယ်မပြောလည်း လုပ်ကြမယ့်သူတွေချည်း။ အဲ့ဒါတွေအပြင် ငပလီမှာ ထူးထူးခြားခြားဘာတွေ လုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့။
1. ပုလဲကျွန်းသွားမယ် 🏝
ငပလီကမ်းခြေကနေ လှမ်းမြင်နေရတဲ့ စိမ်းညို့ညို့ သစ်ပင်တွေဖုံးအုပ်နေတဲ့ ကျွန်းကြီးပေါ့။ ငပလီကနေ ၁၀မိနစ်လောက် စက်လှေနဲ့မောင်းရင်ရောက်တယ်။ တစ်စီးကို ၃သောင်းကျပ်။ ၆ယောက်စီးလို့ရတယ်။ အချိန်က ၄နာရီလောက်နေလို့ရတယ်။ အဲ့ကျွန်းရဲ့သဲသောင်ပြင်က အရမ်းသဘောကျဖို့ကောင်းတာပဲ။ ငပလီဘက် ပင်လယ်ထဲ ရှည်မျောမျော ထိုးထွက်နေတာဆိုတော့ ဘေးနှစ်ဖက်စလုံးက ရေပြင်ကျယ်ကြီး။ ရေနက်ပိုင်းရောက်နေတာဆိုတော့ ရေတွေက စိမ်းပြာရောင် ကြည်လင်လိုက်တာများ သိပ်ကို လှတာပဲ။ ကြည်လွန်းတော့ အဲ့မှာ Snorkeling လုပ်လည်းရတယ်။ စက်လှေမှာ တစ်ခါတည်းပါပြီးသား။ Snorkeling ဆိုတာ ရေငုပ်မျက်မှန်တပ်ပြီး ရေအောက်က ငါးတွေကို ကြည့်တာ။ Snorkeling မလုပ်ချင်ရင်တော့ သဲသောင်အစွန်းမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော စားသောက်ဆိုင် Lobster Bar ကနေ အုန်းရည်နဲ့ အကင်မှာပြီး အုန်းလက်တဲလေးမှာ အေးဆေးအနားယူပေါ့။
2. ပင်လယ်ထဲလှေလှော်မယ် 🛶
Kayaking လို့ခေါ်တဲ့လှေလှော်တာကိုတော့ ပင်လယ်ထဲလှေလှော်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှလုပ်နော်။ နိုင်ငံခြားသားတချို့က ကမ်းစပ်ကနေ ပုလဲကျွန်းထိ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှေလှော်သွားကြတယ်။
3. ပင်လယ်ထဲကနေ Sunset ကြည့်မယ်🌅
မြပြင်ရပ်ကွက်က Pleasant View Resort (PVR) ရဲ့ အရှေ့မှာ ကျောက်ဆောင်ကျွန်းသေးသေးလေးရှိပါတယ်။ ပုလဲကျွန်းနဲ့ ကမ်းခြေအကြားပေါ့။ အဲ့ပေါ်မှာ စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ထားတော့ နေဝင်ချိန်ကို အဲ့ကနေ အေးအေးဆေးဆေး ရှုစားလို့လည်းရပါသေးတယ်။ ကျွန်းပေါ်ရောက်ဖို့တော့ ရေစိုခံမှရမယ်။ ရေတက်ချိန်ဆိုရင်တော့ လှေနဲ့ လိုက်ပို့ပေးတယ်တဲ့။ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပေါ့။
4. ရေသူမရုပ်နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ် ❤️
ငပလီမှာပဲရှိတဲ့ ထူးထူးခြားခြားရေသူမရုပ်ပေါ့။ အရုပ်ဟောင်းနဲ့ အရုပ်သစ်၂ရုပ်ရှိပါတယ်။ ရေသူမရုပ်တုအသစ်က Hotel နားမှာရှိပြီး အဟောင်းကတော့ ငပလီရပ်ကွက် ငပလီ-သံတွဲ လမ်းမနားက ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ရေသူမရုပ်တုက အဲ့တုန်းကနာမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ခင်သန်းနုမျက်နှာအတိုင်းထုထားတယ်ကြားတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် ကြည့်ကြည့်နော်။
5. မီးပုံးပျံစီးမယ် 🎈
ပုဂံတို့ မန္တလေးတို့မှာလိုပဲ ငပလီမှာလဲ မီးပုံးပျံစီးလို့ရပါတယ်။ ငပလီဆိုလို့ ပင်လယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီး စီးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ဒီတော့လေနဲ့လွင့်ပါသွားမှာကို ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ မနက်အစောကြီးထစီးရတာဆိုတော့ မြူတွေဆိုင်းနေတဲ့ ရေမြေတောတောင်အလှ၊ သံတွဲမြို့၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ ကစ္စပနဒီမြစ်နဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတွေကို မီးပုံးပျံပေါ်ကနေ ရှုစားနိုင်မှာပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ လေငြိမ်ပြီး ဧည့်သည်အလာများတဲ့ကာလ (November လကနေ မတ်လအထိ) မှ မီးပုံးပျံစီးလို့ရတာပါ။ တစ်ယောက်ကို $300 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။
6. ဘုရားဖူးမယ် 🙏
ဘုရားလည်းဖူးမယ် လိပ်ဥလည်းတူးမယ်ဆိုသလို လိပ်ဥကြီးပဲတူးပြီး ကမ်းခြေမှာ ပျော်မနေဘဲ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဘုရားဖူးသွားကြပါဦးနော်။ သံတွဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်စေတီတွေဖြစ်တဲ့ အံတော်၊ နံတော်၊ ဆံတော်လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ ဖိုခနောက်ပုံ တစ်နေရာဆီမှာ တည်ထားတဲ့ စေတီ၃ဆူကို ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ ရွှေနံတော်လို့ခေါ်တဲ့ နံရိုးတော်ဌာပနာထားတဲ့ စေတီမှာဆိုရင် လျှောင်းတော်မူဘုရားကြီးလည်းရှိပြီး တောင်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ ရှုခင်းကလည်း သာယာပါတယ်။ မနက်ခင်း နေထွက်ချိန်ရှုခင်းဆို ပိုတောင်လှပါတယ်တဲ့။
7. ဈေးဝယ်မယ် 🛍
ဘုရားဖူးရင်း တစ်လက်စတည်း သံတွဲဈေးဝင်ပြီး အိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေလည်း ဝယ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်နော့်။ ရခိုင်လုံချည်၊ ရခိုင်ထမီ၊ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငါးမုန့်ခြောက်တွေ ဒေသလက်ဆောင်ဝယ်သွားကြပါဦး။ နုမြတ်တို့တော့ အများကြီးဝယ်လာခဲ့သေးတယ်။ ဘုရား၃ဆူနဲ့ဈေးကိုသွားချင်ရင် ၉ယောက်စီး အဲကွန်းကားတစ်စီး ၃၅၀၀၀ကျပ်နဲ့ ဌားလို့ရအောင် သုခလမ်းညွှန်က စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
8. ဇလွန်သွားမယ် 🚌
သံတွဲမြို့ကနေ(၁၀)မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ နာရီဝက်လောက်မောင်းသွားရတဲ့ ဇလွန်မဒေးကျေးရွာမှာတော့ အခုထိ မပုပ်မသိုး မပျက်မစီးတဲ့ ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရဲ့ ရုပ်ကလပ်တော်တွေကိုလည်း သွားရောက်ဖူးမျှော်လို့ရပါတယ်။ တစ်ပါးက ၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပါးကတော့ ၂၀၁၅ခုနှစ်မှာ ပျံလွန်တော်မူခဲ့တာပါ။
9. ရပ်တော်မူဘုရားကြီးဖူးမယ် ⛰
ငပလီကမ်းခြေတောင်ဘက်အစွန်းမှာရှိတဲ့ မဒေးတောင်ပေါ်မှာ ရပ်တော်မူဘုရားကြီးရှိပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းအရမ်းလှပါတယ်တဲ့။ ငပလီကမ်းခြေတလျှောက်ရယ်၊ ပုလဲကျွန်းရယ်၊ ပင်လယ်ပြင်ကြီးရယ်ကို အပေါ်စီးကနေမြင်ရတာ တော်တော်မိုက်ပါတယ်
10. ဆင်စခန်းသွားလည်မယ် 🐘
ငပလီကနေ မိနစ်၂၀လောက်ကားစီးသွားရတဲ့ တလင်းဆိပ်ကျေးရွာကနေ လှေစီးပြီးထပ်သွားရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာသံတွဲမြစ်အတွင်း ငှက်ကြည့်လို့ ရသလို ဆင်လဲစီးလို့ရပါတယ်။ ဆင်စခန်းက ချောင်းဘေးမှာရှိပြီး ဆင်တွေရေချိုးတာကြည့်လို့ရသလို ကိုယ်တိုင်လဲချိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆင်စီးတာကတော့ မိနစ်၂၀လောက်ပါတဲ့။ အကြိုအပို့အပါ တစ်ယောက်ကို $80 ဆိုတော့ ဈေးတော့များပါတယ်။
11. ငါးဖမ်းရွာ တွေကိုသွားလည်မယ် 🐟
ရခိုင်ဒေသခံ တံငါရွာ တွေကိုလည်း သွားလည်လို့ရပါသေးတယ်။ Fish Marketလို့သိကြတဲ့ ဂျိတ်တောရွာကငါးဈေးမှာ မနက်အစောပိုင်းငါးရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ တံငါရွာတွေမှာ တံငါသည် ရေလုပ်သားတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝ၊ အတွေ့အကြုံတွေ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
ပင်လယ်ကမ်းခြေဆိုတော့ ပင်လယ်စာတွေ အမုန်းစားခဲ့တာပေါ့။ ဟင်းတစ်ပွဲကို ၄၀၀၀-၅၀၀၀လောက်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ပန်းဂဏန်းကတော့ တော်တော်လေးလတ်ဆတ်ပြီး အသားပြည့်တယ်။ ပုစွန်တွေဆိုလည်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဆိုင်တွေကတော့အများကြီးပဲ။
တခြားဒေသထွက်အစာဆိုရင် လေဆိပ်နားမှာရောင်းတဲ့ ကောက်ညှင်းထုတ်သေးသေးလေးရယ် သံတွဲဈေးက ကြိတ်မုန့်လို့ခေါ်တဲ့မုန့်ရယ်လည်း စားလို့သိပ်ကောင်းတယ်။
🏩⛱🌴 အေးအေးဆေးဆေး ဘယ်မှာတည်းမလဲ
ငပလီမှာတည်းခိုစရာ ဟိုတယ်တွေ များပါတယ်။ တစ်ခန်း ၂သောင်းတန်ကနေ $များစွာပေးရတဲ့ အခန်းတွေအထိ အစားစားရှိပါတယ်။ နုမြတ်အကြံပေးချင်တာကတော့ ပိုက်ဆ့တက်နိုင်ရင် ဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတည်းပါ။ တခြားသွားရင် တစ်နေကုန်လျှောက်လည်ပြီး ဟိုတယ်မှာ ညအိပ်ရုံဆိုတော့ ဟိုတယ်မှာ ချွေတာလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ်းခြေသွားတဲ့အခါမှာတော့ ဟိုတယ်ကအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်ကို Relax ဖြစ်စေတဲ့ service ကောင်းပြီး စိတ်ချမ်းသာစေနိုင်တဲ့ ဟိုတယ်မျိုးသာရွေးသင့်ပါတယ်။
နုမြတ်တို့က မြပြင်ရပ်ကွက်က Amata Resort မှာတည်းခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်က Location အရမ်းကောင်းတယ်ပြောရမယ်။ ထွက်လိုက်တာနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေ တန်းစီနေတာ။ တစ်နေ့တစ်မျိုး မရိုးအောင် စားလို့ရတယ်။ ပင်လယ်ကြီးနဲ့ နီပြီး ကမ်းခြေကျဉ်းတာလည်း တစ်မျိုးဆန်းတာပဲ။ ရေတက်ချိန်တွေဆို ဟိုတယ်အစပ်အထိတောင် ရေရောက်တယ်။ လှိုင်းသံကြီးတွေဆို အကျယ်ကြီး။ ပင်လယ်ထဲရောက်နေသလိုလို။ ခံစားချက်က အငြိမ့်။
သူ့မှာ ပင်လယ်ဘက်မျက်နှာမူထားတဲ့ ရေကူးကန်ရှိတော့ ရေကူးရင်း ပင်လယ်ကြီးထဲ နေလုံးကြီး တဖြည်းဖြည်းဝင်တာတာကို ခံစားလို့ရတာပေါ့။ ရေကူးကန်ဘေးပတ်လည်က ခုံလှလှလေးတွေမှာ ပင်လယ်ကြီးကြည့်ပြီး မနက်စာစား ညနေကျတော့ နေဝင်ချိန်ကြည့်ပြီး Cocktail သောက်… ရေလည် ဖီးလ်ပဲပေါ့
ဟိုတယ် lobby ရယ် ကမ်းခြေဆီသွားရတဲ့ လျှောက်လမ်းရယ် အရမ်းသဘောကျတာပဲ။ Library နေရာလေးလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဧည့်သည်တွေချန်ထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို စာကြည့်တိုက်လို စင်လေးနဲ့ ထားပေးထားတာ idea လေးမိုက်တယ်။ ဧည့်သည်တွေကနိုင်ကံစုံကဆိုတော့ စာအုပ်တွေကလည်း ဘာသာစုံပေါ့။
Amata Resort မှာက Room Type ၄ မျိုးရှိပါတယ်။ ဈေးအကြီးဆုံး Sea View Cottage မှာ ကိုယ်ပိုင် ၂ထပ်ဘန်ဂလို ကိုယ်ပိုင် Private Pool နဲ့ ပင်လယ်ဘက်ကို မျက်နှာမူထားတာ။ Cabana Cottage မှာတော့ ၂ ထပ်ဘန်ကလိုလေးပဲ။ ကိုယ့်ဝန်းနဲ့ကိုယ့်ခြံ ကြိုးပုခက်လေးတပ်ပေးထားတယ်။ သဘောကျစရာလေး။ နုမြတ်တို့တည်းခဲ့တဲ့ Deluxe Sea View ကတော့ ဈေးလည်းမဆိုးသလို ကမ်းခြေနဲ့လည်း အနီးဆုံးပဲ။ ၂ထပ်ရှိပြီး။ အပေါ်ထပ်ရော အောက်ထပ်ပါ View လှတယ်။ အခန်းကျယ်တယ်။ Superior Garden View ကတော့ ဈေးအသက်သာဆုံး ဖြစ်ပြီး ဆိတ်ငြိမ်တဲ့ တောလေးထဲရောက်နေသလိုလိုရယ်ပေါ့။
ငပလီမှာက လင်းသာ၊ မြပြင်၊ ဂျိုက်တော၊ ငပလီ၊ ဇီးဖြူကုန်း ဆိုပြီး ရပ်ကွက်ကြီး ၅ခုရှိပါတယ်။ အဲ့မှာမှ ပိုက်ဆံချွေတာချင်ရင်တော့ ငပလီရပ်ကွက်က ရေသူမရုပ်တုအဟောင်းနားမှာ ၃၀၀၀၀တန်လောက်နဲ့ ကမ်းခြေနဲ့ နီးနီး တည်းခိုခန်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့မှာ ကမ်းခြေ View ကြည့်လို့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ တည်းခိုခန်းပုံတွေလည်း ထည့်ပေးထားတယ်နော်။ ရွာထဲမှာတည်းရင်တော့ စက်ဘီးတို့ ဆိုင်ကယ်တို့ဌားပြီး ကမ်းခြေဆီသွားလို့ရတယ်။
ဟိုတယ်တွေချိန်ဆလို့ရအောင် ဈေးအကြမ်းဖျဉ်းလေးထည့်ပေးထားတယ်။ အခန်းအမျိုးအစားရယ်၊ သွားမယ့်အချိန်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဈေးတွေကတော့ Sea View အခန်းတွေဖြစ်ပြီး သုခလမ်းညွှန်ကနေ Booking လုပ်ရင်ရမယ့်ဈေးတွေပါတဲ့။ Ph No. 09252929722 , 733 , 744 , 755 , 766 ကို အသေးစိတ်လှမ်းမေးကြည့်ပါနော်။
Hilton ~ 425USD
Aureum Palace Hotel ~ 250USD
Amata Resort ~ 235USD
Jade Marina ~ 235USD
Thande Beach Hotel ~ 185USD
Bay View ~ 185USD
Hotel At The Rock ~ 180000 Ks
PVR ~ 170USD
Merciel ~ 150USD 144,000
Amazing Hotel ~ 145USD
Yoma Cherry Lodge ~ 145USD
BT ~ 140,000 Ks
Lin Thar Oo ~ 110USD
Silver Beach ~ 100USD
River Top Hotel ~ 100USD
Royal Beach Motel ~ 80USD
အခန်းပုံလေးတွေနဲ့ ကားခနဲ့ အခန်းအပြီးအစီး Package တွေကို သုခလမ်းညွှန်ရဲ့ ဒီ Link လေးမှာ ကြည့်ပေးနော်။